डडेलधुरा बस दुर्घटनाकामा आमा गुमाएको यी बालकको लागी सहयोगको अपिल – सके सहयोग नसके शेयर गरिदिनुहोला – PathivaraOnline
Home > समाचार > डडेलधुरा बस दुर्घटनाकामा आमा गुमाएको यी बालकको लागी सहयोगको अपिल – सके सहयोग नसके शेयर गरिदिनुहोला
डडेलधुरा बस दुर्घटनाकामा आमा गुमाएको यी बालकको लागी सहयोगको अपिल – सके सहयोग नसके शेयर गरिदिनुहोला
admin November 26, 2018 समाचार 0
काठमाडौं : डडेलधुरा बस दुर्घटनाका घाइते भएका नवीन बिकको उपचारका लागि सहयोगको याचना गरिएको छ। उनको काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। बिहीबार डडेलधुराबाट डोटी जाँदै गरेको बस दुर्घटमा डोटीका ८ वर्षीय बिक घाइते भएका थिए। उनकी आमा शशीकलाको सोही दुर्घटनामा परी निधन भएको छ।
डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिरमा मेला भरेर फर्किदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २८ घाइते छन्। अस्पतालका अनुसार उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। छातिको करङ समेत भाँचिएको छ। उनी अहिले अर्धचेत अवस्थामा अस्पतालको बेड नम्बर ५१८ मा छट्पटाइरहेका छन्।
घाइते बालकका बुबाले अर्को विवाह गरी परिवारबाट सम्पर्कबिहीन छन्। अभिभावको रुपमा रहेकी आमाको मृत्यु भएपछि नवीन बेसाहारा भएका हुन्। उनी दुर्घटना हुनुअघि आमासँगै दिपायलस्थित सेती नदीमा गिटी कुटेर जिविकाेपार्जन गरिरहेका थिए। घाइते बालकको उपचारका लागि डोटेली समाज काठमाडौंले सहयोगको अपिल गरेको हो।
सहयोग दाताले डोटेली समाज काठमाडौंको नाममा रहेको नयाँ बानेश्वरस्थित कृषि विकास बैंकको खाता नम्बर ०४०४१२ मा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुने छ। थप जानकारी लागि ९८५१०१६३२५ नम्बरमा फोन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
घुस नदिएपछि ट्राफिकले रामधुलाई गराएपछि एक युवाले दुखेसो पोख्दै फेसबुकबाटै मागे न्याय!
सबैका प्यारा थिए यी रिमाल दम्पती : सडकमै एकैसाथ ज्यान गुमाएपछि चल्यो रूवाबासी!
यी ब्यक्ति जस्ले जन्मदिनमा दिए आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार सहयोग!
काठमाण्डौमा बिहिबार बिहान देखिनै कडा निषेधाज्ञा: के के नपाइने ?(आदेश सूचना सहित)